Karohy Martin B-26B-C Marauder FSX & P3D - Rikoooo
Martin B-26B-C Marauder FSX & P3D Version 1.1
Downloads 6 402
Mpanoratra: Milton Shupe, Tom Falley, Martial Feron, Steve Bryant, William Ellis, Greenhouse357, Pierre-Jean Carosin sy Sounds avy amin'i Nigel Richards
Magnificent Martin B-26 Marauder version B sy C teraka FSX ary mifanaraka amin'ny Prepar3D v4. Ny Martin B-26 Marauder dia fitaovam-piadiana amerikana efa nampiasaina nandritra ny Ady Lehibe Faharoa teo anoloana Eoropeana sy tany amin'ny Ady Lehibe Pasifika. Tamin'ny faran'ny ady, nisy pirampea 5,157 natsangana. Tsy misy afa-tsy 3 eto amin'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao, ny iray amin'ireo dia aseho amin'ny Mozea Landing Beach. (Loharano Wikipedia).
An-kalamanjana hafa izay tsy misy afa-mialona amin'ny karama, noforonin'i Milton Shupe (sy ny ekipany) noho izy. Ny fiaramanidina ao anaty fiaramanidina dia modely tanteraka ao 3D miaraka amin'ny basy milina mavitrika sy ny fomba fijery samihafa. Ahitana ny tontolon'ny 16 sy ny feo sy ny fomba amam-panao.
Ny fahitana ny mpanamory fiaramanidina sy ny mpihazakazaka dia fehezin 'ny famantaran-batana.
Ny fidirana fidirana / ny fivoahana (eo anelanelan'ny seza) dia mavitrika amin'ny fiovan'ny + e hanokatra / akaiky.
Ny baomba mandrehitra ny varavarana dia mampiasa ny fiovana + e, 2 fiara vavahadin-tseranana.
Ny varavarankelin'ny pilot / co-pilot dia mampiasa ny shift + e mba hanokafana / hanidiana.
Ny jiro dia azo afenina amin'ny fipihana ny kisary "YK" eo amin'ny tontonana VC.